कथा फोन फोबिया
फोन आयो । फेरि फोन आयो । त्यो फोन आउँछ भन्ने मलाई थाहा थियो । घडी हेरेँ, ठ्याक्क १०ः३० भएको छ । फोन उठाउना साथ उताबाट मसिनो स्वर आयो, “कृपया रङ नम्बर भनेर फोन नराखी दिनुहोला । म लता बोल्दै छु । तपाईंको स्नेहको लता । तपाईंको प्रेमको पात । तपाईंको पूजारिनी–भिखारिनी ।”
यो सधैँको स्वर हो । त्यही युवती हो । मैले ‘तपाईं कहाँ फोन गर्दै हुनुहुन्छ, रङ नम्बर’ भनेर ढ्याङ्राङ कडा स्वरमा फोन राख्ने चाहेँ । तर, किन–किन सकिनँ । हुनसक्छ, यही मेरो कमजोरी हो । यो युवा नारी स्वर एकनास आइरह्यो, “म तपाईंको प्रेममा पागल भएँ । मेरो बिन्ती छ, रिसाएर फोन नराखी दिनुहोला । अस्ति क्याम्पस जाँदै थिएँ, तपाईंलाई बाटोमा देखेँ । साइकल रोकेर कुरा गरौँजस्तो लाग्यो । तर, किन–किन सकिनँ । त्यही रात यही समय तपाईंलाई फोन गरेकी थिएँ । रिसाएर तपाईंले ड्याङ्राङ फोन राखिदिनुभयो ।”
“म फोन राखिदिन्छु,” मैले रिसाउन चाहेँ ।
“मसँग नरिसाइ दिनोस्, बिन्ती छ मेरो राजा ! म तपाईंको पाउमा पर्छु । खुट्टा ढोग्छु । तपाईंले रिसाएर फोन राखिदिनुहुँदा मेरो छातीमा बज्र परेजस्तो हुन्छ । भुइँचालो आएजस्तो गरेर म रन्थनिन्छु । मलाई यसरी नसताउनोस् । यसरी ज्यूँदै नमारी दिनोस्...।”
एउटा लामो फिरादपत्रजस्तो त्यो स्वर आइनै रह्यो । यसरी त्यो फोनको स्वरले मलाई पछ्याएको एक वर्षभन्दा बढी हुन लाग्यो ।
जब त्यो स्वर आउँछ, म अनायास टाढा कतै आफ्नो घर पुग्छु । ती नांगा डाँडाहरूमा पुग्छु । ती निरीह आँखाहरूमा पुग्छु । त्यहाँ न फोन, न यी स्वरहरू छन् । यी आवाजहीन आवाजहरू मभित्र आउँछन् । सोह्र वर्ष टेक्न लागेको मेरो छोरो सुदीप अनुरोध गरिरहेछ, ‘‘मलाई एसएलसी पास गर्नासाथ त्यहाँ बोलाउनुहोला बुवा ! म तपाईंसँग सहरमा बसेर पढ्छु । म आई.एस.सी. पढ्छु, बायो लिएर । अनि, बंगलादेशमा गएर डाक्टरी पढ्छु ।’’
मलाई लाग्छ, त्यो युवतीको फोनको जवाफ मेरो जेठो छोराले दिनुपर्ने हो । तर, त्यहाँ फोन छैन । न सहर छ । न गल्ली छ । मेरो छोराको रोल म कसरी गरूँ यस सहरमा ? म यहाँबाट भाग्न सक्तिनँ ।
“मलाई निद्रा आइरहेछ, मलाई सुत्न दिनोस्...।,” म गम्भीर भएर अनुनय गर्छु ।
“कृपया फोनको लाइन नकाट्नु होला । म रातभरि फोन गरेर तपाईंलाई डिस्टर्ब गर्छु । कस्तो ढुंगाजस्तो मान्छे । दुई–चार मिठा शब्दहरू बोल्न पनि तपाईंलाई आउन्न । एक–एक वर्षसम्म माया नपलाउने त्यो कस्तो मुटु हो । म माटाको हो कि मासुको । म के गरूँ ? तपाईंलाई निद्रा आइरहेछ । मबाट निद्रा भागिरहेछ ।”
“किन–किन म निदाउन सक्तिनँ । सारा कुराहरू बिर्सेर मन हलुंगो पार्न खोज्छु । तर, गहु्रुँगो भइरहन्छ । त्यो गहु्रँगो पार्ने तपाईंको छाया हो, जसले मलाई मोहनी लगाइदियो । तपाईंलाई नपाए तपाईंको नाममा मरिदिन्छु । यौटा अन्तिम चिठी लेखेर म सदा–सदाका निमित्त बिदा भइदिन्छु ।”
“तपाईंले फोन राख्न लाग्नुभयो ! किरकिर आवाज आइरहेछ । ए सुन्नोस्, म भोलि तपाईंको अफिसमा भेट्न आउँछु । भन्नोस्, मलाई भेट दिनुहुन्छ कि हुन्न ? कि मलाई देख्नासाथ भाग्नुहुन्छ ? भन्नोस् । भोलि म ठ्याक्कै ११ बजे आउँछु है...।” त्यो स्वर ननस्टप एकनास आइरह्यो । कहीँकतै टेप गरेर बोलेजस्तो । कहीँकतै फुलिस्टप छैन ।
“ल...ल...भोलि आउनू...,” म झन्झट पन्छाउन खोज्छु । कत्ति सुनिरहूँ यो झर्को लाग्दो फोन । कस्ती फतौरी आइमाई हो यो, अर्काको लोग्नेसँग फोनमा यत्ति लामो कुरा गर्न सक्ने !
“म भोलि त्यहीँ आउँछु...।” उसले फोन राखी । म आश्वस्त भएँ । पहिले छुट्ट्याउन चाहेँ, यो दिन हो कि रात । मैले निश्चय गरेँ, यो रात हो । अहिले ११ बजेको छ । पूरा आधि घण्टा नकचरीले फोन गरी । अनि, फेरि निश्चय गरेँ, यो कुनै खास सपना होइन । यो खासै विपना हो । यो फोन गर्ने केटीको नाम पनि विपना हो । अनि, विपनाले मलाई फसाउन खोजेकी हो । त्यो कहिले विपना हुन्छे, कहिले सपना अनि कहिले लता ।
म भने अब निदाउन सकिनँ । जिन्दगीको पूरा चित्र भित्तामा कोरियो । बाल्यकालका केही प्रसंगहरू आए । ठूला–बडाको सिको गरेर जिन्दावाद र मुर्दावाद भन्दै झन्डा बोकेर दौडेको सम्झनाहरू अलिकति ताजा भए । कहिले पानीहरूमा दौडेको, कहिले रङमा डुबेको कुराहरूले मन त्यसै अमिलो भयो । अनि, जागिरको पछि दौडेको क्रम पनि आयो । कहिले मिलटरीको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट हुने सपना, कहिले पुलिसको इन्सपेक्टर । जहाँ–तहाँका ढोकाहरू आफ्ना लागि बन्द भए । आफ्ना पार्टीका नेतासँगको न चिनजान न बलियो नाता–गोता । सबैले उपेक्षा गरी छाडेको यो जागिर खाँदा पनि खान सकिने स्थिति रहेन । कहीँ हाकिमहरूले खेदेका छन्, कहीँ सँगैका साथीहरूले छेकेका छन् । कति कठिन लाग्छ बाँच्नु ! फेरि, अर्थ बे–अर्थका फोनहरूले पनि दिमागको भित्रसम्म हल्लाउँछ । यी कत्ति फोन गर्छन् र मलाई बोर गर्छन् । मानौँ, फोनमा नै जन्मेका हुन् वा यी कहिले सपना हुन्छन्, कहिले विपना । कहिले लहरा हुन्छन् भने कहिले पात । तिनलाई थाहा छ, म तिनको जिन्दगीको साथी हुन किमार्थ सक्तिनँ । खोलाले छाडिदिएको बगरजस्तो छु, पानीको लहर कहिल्यै पनि नपुग्ने अथवा डाँडामाथिको फूलको बोट छु, वसन्तमा पनि फुल्न भुलिदिने ।
कत्ति एकाकी लाग्छ, यो जागिरे जीवन । सारा नांगा पहाड–पहाडमा दौड । निमुखा जनतालाई विकासको भाषण देऊ । आफैँलाई थाहा छ, यो खोक्रो नारा मात्र हो, यसमा कुनै सार छैन । तर पनि जागिरेको काम भन्ने भ्रम पाल्यो । अनि, कहिले तराईका बालुवाहरूमा दौड । बालुवाबाट तेल निकाल्ने जुक्तिहरू निकाल । गर्मी र पसिनासँग कुस्ती खेल । हिन्दी, मैथिली वा थारु भाषामा कनिकुथी विकास र निर्माणका सपनाहरू बाँड । कहिलेकाहीँ आफैँभित्र विद्रोह गर, कसलाई चाहिएको छ यो राष्ट्र, यो देश, मेची–कालीको टुक्रा ? अन्यथा, जो कोही लुट्न मात्र तयार छ । कोही केही कुराको जिम्मेवार छैन । ती धेरैमध्ये म पनि एक हूँ । विकास थापा पनि एक हूँ ।
घरबाट श्रीमती ल्याएर बसूँ, कसले हेर्ने घर ? कसले पढाउने र स्याहार–सुसार गर्ने स–साना केटाकेटीहरूलाई ? अझ कत्ति लामा वर्षहरू बाँच्नु छ । अनि, एकाकी बसूँ, यी फोनहरूले तर्साउँछन् । कत्ति कमजोर लाग्छ आफूलाई, जाबो फोनहरूसँग तर्सने, फोन फोबिया भएजस्तो ।
अनायास बिहान हुन्छ । यौटा नियमित बिहान र त्यसरी नै सुरु हुन्छ नियमित जागिरे जिन्दगी । टेबल र कुर्सीहरूको जिन्दगी । पिउन, पाले र हाकिमहरूको जिन्दगी ।
रात परेपछि फेरि त्यही फोनको डर । फोनलाई छुटाएर राखुँ भने घरबाट श्रीमतीको फोन आउन सक्छ । अथवा केन्द्रबाट नै कुनै जरुरी मेसेज आउन सक्छ । ठिकमा राखुँ, माया गर्छु भन्नेहरूको डर लाग्छ । यो कस्तो संकष्ट हो ? मुक्ति छजस्तो लाग्दैन, यस संकष्टको । कुरा गर्दा–गर्दै लाग्छ, आफू कुनै पुलमुनिबाट अब खस्न लागेको छु । समयको भेलले लगेर कहीँ टाढा कतै जंगलमा लगेर फ्याँँक्न लागेको छ । खालि पलायनको कुरा । खालि भाग्ने कुरा । कार्यालयमा पनि दिनभर निरर्थक मान्छेहरूको भिडसँग भाग्नुपर्ने हुन्छ । कत्ति भागुँ म, कहाँ कहाँसम्म । आवाज मात्रै सुन्छु । ती भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छन् । महँगीका विरुद्धमा छन् । फोहरी राजनीतिको विरुद्धमा छन् । ती रङहरूसँग छन् । झन्डाहरू छन्, तिनका अघि र पछि । मेरा अघि–पछि कतैतिर केही छैनन् । खालि यो कार्यालय, यो एकान्त र शून्यपन ।
त्यही शून्यपनलाई बिथोल्न कहिलेकाहीँ रङ कल आउँछ । रङ कलको जवाफमा रङ कुराहरू गरिदिन्छु, ‘म यहाँको पिउन बोलेको । नाम भन्नुभएको ? नाम कृष्ण हो । ...अँ हो, हाकिमको नाम पनि कृष्ण । असिस्टेन्टको नाम पनि कृष्ण । अनि, यो अफिस नै कृष्णहरूको ।’ यौटा लामो र उत्साहपूर्ण हाँसोपछि फोन स्वतः समाप्त हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ कहाँ पर्यो यो ? भन्दा, ‘कानमा’ जवाफ दिनुको रमाइलो पनि छ । अनि, कसको कानभन्दा ‘तपाईंले मन पराएको मान्छेको’ भन्नुको मज्जा पनि छ । अनि, त्यही रमाइलो र मज्जासँग पूरै जिन्दगी बिताउने कुराले भने त्यसै भारी हुन्छ । त्यो गहु्रँगोपन र भारीलाई सगरमाथा आरोहणमा हिउँको आँधीबेहरीसँग तुलना गर्न मन लाग्छ । सफलताको त्यो आखिरी क्षणमा कसरी सारा सपनाहरूमा पहिरोे जान्छ, अनि भत्केको मन लिएर चुपचाप ओरालो लाग्नु ! ठिक त्यही स्थिति हो, लताको पनि, सपनाको पनि र अरू कसैको पनि ।
फोनको मधुरो स्वरलहरीले तानेर मलाई ३० वर्ष अगाडि पुर्याउँछ । अनि, त्यहाँको प्रेम–प्रसंगले, ताजा कुराकानीले एकैचोटि ५० वर्षमा लगेर फ्याँकिदिन्छ । म समयको चक्रमा नराम्ररी पछारिन्छु । त्यहाँबाट उठ्न सक्तिनँ । अनि, एक्कासि म वर्तमानमा आएर उभिन्छु । त्यो वर्तमानमा श्रीमती छे, तीन–तीनजना छोरा–छोरी छन् । अझ वृद्धावस्थाका माता–पिता छन् । आँखामा तिनका अनुहारहरूले एकैपटक आएर सोध्छन्, यो उमेरमा कहाँबाट आए यी स्वरहरू ? यी अर्थपूर्ण आवाजहरू । तपाईंलाई अलिकती लाज छैन ? के घृणाको कुनै अंश छैन ?
ती सबको कुनै जवाफ मसित छैन । म शिथिल हुन्छु । थुप्रै लामखुट्टेहरुले टोकेको अनुभूति हुन्छ । आफैँसित क्षोभ र घृणा उब्जन्छ । खोज्न मन लाग्छ, आफ्नो नयाँ र सफा आकाश । तर, त्यो आकाश कहीँ छैन । त्यो क्षितिज यहाँ कहीँकतै छैन । जहाँतहाँ शून्य र अन्धकार छ । त्यो अन्धकारभित्र आजको रात पनि सशंकित छु, त्रसित छु ।
दिउँसो सपना आइन्, राम्रै भयो । त्यो कस्ती छे, देखेको पनि छैन । त्यसको अनुहारमा कस्तो रङ छ, थाहा छैन । आइन् र राम्रो गरी । लाग्छ, त्यो फोनकी परी हो । फोनमा नै आउँछे र फोनमा नै जान्छे । कति रमाइलो लाग्छ, भ्रमहरूमा बाँच्नु । सपनाहरूको रंगीन आकाशमा चंगाजस्तो उड्नु ।
दश बज्यो । फेरि फोनको घण्टी बज्यो । मलाई थाहा छ, यो सपनाको फोन हो । त्यो फोन आउँछ...आइरहन्छ । म उठाउँछु, नबोली राखिदिन्छु । फेरि, उताबाट रिङ आउँछ । घण्टी बजिरहन्छ । म उठाउँछु । रङ नम्बर भनिदिन्छु, राखिदिन्छु । फोन गर्ने मान्छे थाक्तैन । फेरि, फोन आउँछ । फेरि उठाउँछु, रङ नम्बर भनेर राखिदिन्छु ।
मलाई टेलिफोन सेट जंगलको बाघजस्तो लाग्छ । मानौँ, त्यसले मलाई खान तयार छ । फोनको प्रत्येक घण्टी मलाई आफ्नै मृत्युको घण्टी बजिरहेजस्तो लाग्छ । धेरै बेर म उठाउँछु, राख्छु । उठाउँछु, राख्छु । तर, फोन आउन छाड्दैन । त्यो बाघले मलाई नखाई छाड्दैन । मेरा अगाडि थुप्रै समयहरू आउँछन् । यो वर्तमान आउँछ । अनि, अनिश्चित भविष्य आउँछ । मलाई अव्यक्त डर लाग्छ । त्यस डरलाई हटाउन चाहन्छु । फोन भने आउँछ, एकनास आइरहन्छ ।
फेरि, फोन उठाउँछु । मैले राख्न नपाउँदै उताबाट आवाज आउँछ, “तपार्इं किन फोन काट्नुहुन्छ डैडी ! म सुदीप बोलेको काठमाडौंबाट ।” फेरि, त्यो आवाज आउँछ, “मम्मी सिकिस्त हुनुहुन्छ... तपार्इं तुरुन्त आउनोस्... तुरुन्तै आउनोस्, म काठमाडौंबाट बोल्दै छु ।”
विचरा ! सुदीप मजस्तै आत्तिएको छ, डराएको छ ।